Burcad Dishay Soomaali Ganacsade Ahaay – Great Banaadir
Burcad Dishay Soomaali Ganacsade Ahaay
EAST LONDON, Koofur Afrika – Kooxo Burcad Koofur Afrikaan ahaay, ayaa waxey Xalay Saqdii Dhexe ay Goobtiisa Ganacsi ku dileen Maxamed Ismaaciil Kiish, oo kamid ahaa Odayaasha ugu Magaca Dheer Jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Dalka Koofur Afrika.
Kooxaha Burcada ah, ayaa waxey Ganacsadaha ay ku dhex toogtay Dukaankiisa oo ku yaalla Magaalada East London ee Koonfur Afrika, iyaga oo Dilka kadib baxsaday.
Mid kamid ah Ganacsatada Soomaalida ah ee ku sugnaa meel aan ka fogeen halka Dilka uu ka dhacay ayaa sheegay in Kooxaha Burcadda ah ay sidoo kale dhaceen Ganacsadaha ay Dukaankiisa ku dileen.
“Dhagarqabayaal hubaysan, ayaa Ganacsade Kiish Goobtiisa Ganacsi ugu galay oo toogtay, isla markaana dhacay Dukaanka, waxayna jebiyeen Kaamirada (Camera CCTV-da Dukaanka) ku xirneyd, si aan loo aqoonsan, balse Receiver-ka Camera-da uma suurtagalin inay qaataan,” ayuu yiri Qof Goobjooge ahaay.
Ciidamo katirsan Booliska Koofur Afrika ayaa tegay halka uu Dilka ka dhacay, iyaga oo doonayay inay Gacanta ku dhigaan Kooxaha Burcadda ah, balse ay ku guuleysan waayeen.
Dalka Koofur Afrika ayaa waxaa joogto ka noqday Dilalka loo geysanayo Ganacsatada Soomaalida ah, waxaana ilaa iyo hadda jirin Dad isku xilsaaray inay ka hortagaan, xitaa ha ahaadaan Dowladaha Soomaaliya iyo Koonfur Afrika.